Sivavanye i-APK yesiqalisi se-POCO, isixhobo sokuqalisa esilinganiselweyo | I-Androidsis
UManuel Ramirez | | APK, Izaziso
Xolela ukungafuneki, Sele sine-APK yesiqalisi senkqubo kaPoco F1Isiphelo sendlela ethe yanyamalala phantse ngaphakathi kwimizuzu nje embalwa emva kokuba kuthengisiwe eIndiya.
I-POCO Launcher ngumqalisi we-app ukuba sivavanye ngeli xesha kwaye siyayithanda "incinci" kuthi, kuba ayizisi nantoni na eyenza ukuba ikhetheke xa siyithelekisa neNova Launcher okanye iPaun Launcher kaGoogle.
1 Umthumeli othanda "encinci"
2 Umqalisi wePOCO
3 Isiqalisi sohlelo lokusebenza njengesiseko
Umthumeli othanda "encinci"
Izolo besikhona Ukuthetha ngokufika kwesiQalisi sePixel esingenasiphelo kwiVenkile yokuDlala kuGoogle ukusothusa sonke. Yintoni esivumela ukuba sibe kwindawo yayo kunye nefowuni kaGoogle.
I-POCO Launcher ngumsunguli we-Pocophone F1, Isiphelo sendlela kwimizuzu emi-5 kuphelile kwisitokhwe eIndiya. Sothukile kukuba umthumeli ubekwe kwiVenkile yeGoogle Play ukuze nabani na angazama, nangona ikwi-beta evaliweyo, isabelo sabavavanyi ifikelele kumda wayo kwaye ayinakwenzeka.
Nangona kunjalo Unokuzikhuphelela i-APK esishiya kuwe ekugqibeleni yale posi ukuze ukwazi ukuzama amanqaku esiqalisi se-POCO, isixhobo sokuqalisa esiza emva kwesiqalisi sePixel; ngakumbi ekubeni ngumgcini okhuselayo kakhulu kukhetho kwaye oko kusekwe kwiiyantlukwano ezincinci.
Isiqalisi sePOCO iphawulwa yidrowa yeapp ukuba singaphehlelela umqondiso kwi «Pixel Launcher» nangokuba kwidrowa uthotho lweendidi ezihlela usetyenziso olwahlukeneyo esilufakileyo. Oko kukuthi, singaya kudidi lokuzonwabisa ukuze sifumane iiMidlalo zokuDlala okanye ii -apps zeNetflix, ngelixa ii -apps zonxibelelwano zisebenzisa i-WhatsApp kunye nezinye.
Olu luphawu oluphambili lomphanda kwaye akukho nto iphantsi kwedesika ukubonisa ibha yesaziso, nangona uyakufumana iiwijethi kunye nemifanekiso, kunye noseto, xa ucinezela ixesha elide. Oko kwathethi, useto lokuqalisa lubekwe ngasekunene kwetrowa yeapp.
Nangona useto nalo ukunqongophala kokukhetha okuninzi phantse ukuhlala kwinto. Sithetha ngokukwazi ukwenza ukuba kusebenze iingcebiso zesicelo, iqela lesoftware ngokuzenzekelayo, lawula amaqela eeapps, imibala yeqela ngombala, tshintsha ibar yescroll, gcwalisa iiseli ezingenanto, utshixe ubeko lwescreen sasekhaya kwaye wongeze ngokuzenzekelayo iiapps ezifakiweyo ekhaya.
Zonke ezo zizinto onokukhetha kuzo oza kuzifumana kuseto lwe-POCO Launcher. Ke silapha ngaphambili umthumeli onomda kakhulu ngokwezifiso inikezela ngokusebenza okuhle. Nangona ungasiqonda ukuba kutheni isebenza kakuhle ukuba awunakhowudi.
Isiqalisi sohlelo lokusebenza njengesiseko
Ngokusisiseko iPOCO Launcher sisiqalisi esithi isebenza njengesiseko salo naluphi na uhlobo lomsebenzisi, nangona abo baninzi abaza kuyifumana kungekudala, ihlala ingabo bahlala beyisebenzisa ngokwezifiso iiselfowuni zabo. Abayi kuthatha ixesha elide ukutshintshela kwiNova Launcher okanye Isiqalisi sePixel esingenaNgcambu uqobo Inika ezinye zezinto ezinje ngokutya kukaGoogle ngesimbo somzimba okanye "NgokuKhawuleza".
Eyona misebenzi mibini ibalaseleyo siye sayibona yesiqalisi sePOCO inkululeko yokukhumbula, equka i-icon kwidesktop enepesenti eboniswe kwisangqa esiluhlaza, kunye nokubeka ii -apps ngokombala. Eminye, asinakuthetha kancinci malunga nesiqalisi sePOCO esinomtsalane omkhulu wokuba uvela kwiXiaomi kunye nophawu olunethemba lokwehlisa amaxabiso ngakumbi kwimarike.
Kwaye ngelixa isigaba se-beta sivaliwe, Unokuzikhuphelela i-APK Apha ngezantsi ukugqiba ukuba ngaba umthumeli ohlwempuzekileyo ulungile. Ukuba ulinde iPocophone F1 yakho, musa ukulibazisa ukuyifaka.
I-POCO Launcher sisiqalisi sohlelo lokusebenza esazi nto encinci kwaye oko kubonisa iinjongo zikaXiaomi ekuthengeni isoftware yolu hlobo lutsha lunethemba lokutshintsha izinto.
Khuphela i-APK: ISITHEMBISO SOKUQALA
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » APK » Khuphela i-APK ye-POCO Launcher ngoku, i-launcher ye-app ethanda ngokwenene "encinci"